सिल्ल्टले3मुख्य वेब स्क्रैपिंग मोडहरू प्रदान गर्नुपर्दछ
वेब स्क्रैपिंग, वेब कटाई र डेटा निकासी को रूप मा पनि जाना जाता छ, नेट देखि जानकारी निकालने को अभ्यास हो. वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर हाइपरटेन्जर ट्रांसफर प्रोटोकॉल संग वा अन्य वेब ब्राउजर मार्फत इन्टरनेट को उपयोग गर्दछ।. विशिष्ट जानकारी एकत्रित र प्रतिलिपि गरिएको छ. यो तब एक केन्द्रीकृत डाटाबेसमा सुरक्षित वा तपाईँको हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गरिन्छ. साइटबाट डाटा प्राप्त गर्न सबै भन्दा राम्ररी तरिका यसलाई मैन्युअल रूपले डाउनलोड गर्न हो, तर तपाइँले तपाइँको काम पूरा गर्न वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।. यदि सामग्री हजारौं साइटहरू वा वेब पृष्ठहरूमा फैलिएको छ भने, तपाईंले आयात प्रयोग गर्नुपर्नेछ. तपाईंको आवश्यकता अनुसार डेटा प्राप्त र व्यवस्थित गर्नको लागि io र Kimono ल्याब्स. यदि तपाईंको कार्यप्रवाह गुणात्मक र अधिक जटिल छ भने, तपाइँ आफ्नो परियोजनाहरूको यी यी दृष्टिकोणहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ.
त्यहाँ धेरै खुल्ला स्रोत वेब स्क्रैपिंग टेक्नोलोजीहरू छन्. एक DIY दृष्टिकोणमा, तपाइँले काम गर्ने कामका लागि विकासकर्ता र प्रोग्रामरहरूको एक टोली भाडामा लिनुहुनेछ. तिनीहरू तपाईंको तर्फबाट केवल (1 9) स्क्रैप डेटा हुनेछैन तर ब्याकअप फाईलहरू पनि हुनेछ. यो विधि उद्यम र प्रसिद्ध व्यवसायहरुको लागि उपयुक्त छ. यसको उच्च लागतको कारण एक DIY दृष्टिकोणले फ्रीलान्सरहरू र स्टार्टअपहरू अनुरूप हुन सक्दैन. यदि अनुकूल वेब स्क्रैपिंग प्रविधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने, तपाइँका प्रोग्रामर वा डेभलपरहरूले तपाईले नियमित मूल्यहरु भन्दा बढी खर्च गर्दछन्. तथापि, DIY दृष्टिकोणले गुणवत्ता डेटाको प्रबन्ध सुनिश्चित गर्दछ.
दृष्टिकोण # 2: वेब स्क्रैपिंग टूल्स र सेवाहरु:
अधिकांशतया, मानिसहरूले वेब स्क्रैपिंग सेवाहरू र उपकरणहरूको प्रयोग गर्नका लागि तिनीहरूको काम गरे. अक्टोपारे, किमोनो, आयोत. io, र अन्य समान उपकरणहरु साना र ठूलो मा कार्यान्वयन गरिएका छन्. उद्यमहरू र वेबमास्टरहरूले मैन्युअल रूपमा वेबसाइटबाट डेटा खिच्न सक्छन्, तर यो मात्र सम्भव छ भने उनीहरूको उत्कृष्ट प्रोग्रामिङ र कोडिङ क्षमताहरू हुन्छन्. वेब स्क्रैपर, क्रोम एक्सटेन्सन, साइटमैपहरू निर्माण गर्न र साइटको विभिन्न तत्वहरू परिभाषित गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ. एकपटक एकपटक, डेटा JSON वा CSV फाईलहरूको रूपमा डाउनलोड गरिएको छ. तपाईं एक वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयरको निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ वा पहिले नै अवस्थित उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँले प्रोग्राम प्रयोग गर्नुभएन न केवल तपाईंको साइट स्क्रैप गर्दछ तर तपाईंको वेब पृष्ठहरू क्रल गर्दछ. अमेजन एडब्ल्यूएस र गुगल जस्ता कम्पनीहरू स्क्रैपिंग उपकरणहरू , सेवाहरू र लागतको निःशुल्क डेटा प्रदान गर्छन्.
दृष्टिकोण # 3: डाटा-ए-ए-सेवा (DaaS):
यस सन्दर्भमा डेटा स्क्रैपिंग , डाटा-ए-ए-सेवा एउटा प्रविधि हो जसले ग्राहकहरूलाई अनुकूल डेटा फिडहरू सेट गर्न दिन्छ।. धेरै संस्थाहरूले स्क्रिप्ट गरेको डेटा भण्डारमा राखिएको भण्डारमा. व्यवसायी र डेटा विश्लेषकहरूको लागि यो दृष्टिकोणको फाइदा यो छ कि उनीहरूले तिनीहरूलाई नयाँ र व्यापक वेब स्क्रैपिंग प्रविधिमा परिचय दिन्छन्; यो पनि बढि सुराग उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ. तिनीहरू विश्वसनीय स्क्रैपर्सहरू छनौट गर्न सक्छन्, प्रचलन कथाहरू फेला पार्न सक्षम हुन्छन्, र कुनै पनि समस्या बिना यसलाई वितरित गर्न डेटाको दृश्य.
डाउनलोड गर्न योग्य वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयर
1. यूआईपीथ - यो प्रोग्रामरहरूको लागि एक उत्तम उपकरण हो र साधारण वेब डेटा निष्कर्षण चुनौतिहरु लाई पार गर्न सक्दछ, जस्तै पृष्ठ नेविगेसनहरू जस्तै, फ्ल्यास खुवाउने, र पीडीएफ फाईलहरूको स्क्रैपिंग.
2. आयात गर्नुहोस्. io - यो उपकरण सर्वोत्तम हो यसको प्रयोगकर्ताको अनुकूलन इन्टरफेसको लागि र वास्तविक समयमा तपाईंको डाटा स्क्रैप गर्दछ. तपाईंले CSV र Excel फारमहरू आउटपुटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
3. किमोनो ल्याब्स - एपीआई तपाईंको इच्छाको वेब पृष्ठहरूको लागि सिर्जना गरिएको छ, र जानकारी newsfeeds र स्टक बजारहरूबाट स्क्रैप गर्न सकिन्छ। Source .